Marka ganacsiga u muuqda inuu u shaqeynayo Serge Beynaud - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Marka ganacsiga u muuqda inuu u shaqeynayo Serge Beynaud
Maamulaha Shirkada Star wuxuu dooneynin in uu seexdo munaasabaddiisa, taasina waxay si fudud u muujineysaa. Isagoo ka bilaabay gurigiisa, kadibna furitaankii cuntada degdegga ah ee waddada Grand-Bassam, oo aasaasay xafladdii furmay Sabtidii 6 April 2019.
Serge Beynaud, iyada oo loo marayo guulahaan, waxay muujinaysaa inuu yahay ganacsade weyn iyo muusigga, marka aad runtii siiso, wuxuu abuuri karaa faa'iido weyn.
Marka laga soo tago maalgelintaan, shirkad taleefan gacmeed ayaa sii ballaarisay qandaraaskii Beynaud ee taxane ah. Shirkadda ayaa sheegtay in ay iibisay in ka badan 43 malyan oo malyan ah tan iyo markii loo magacaabay safiir caan ah.
Ninkan da'yarta ah ee 31 ma dhameestireen inuu nagu yaabiyo oo noo muujiyo sida uu u adag yahay. Tani waxaa soo dhaweynaya dadka isticmaala Internet iyagoo faallo ka bixinaya taageerada iyo dhiirigelinta.
Hambalyo udir macallinimada beyena wuxuu u huray inuu shaqeeyo iyo guulihiisa. Waxaan sugeynaa shirkadda xiga ee Serge Beynaud sababtoo ah waxaan ognahay inuu leeyahay mashaariic badan oo bacda ah.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.abidjanshow.com/people/actu/quand-les-affaires-semblent-marcher-pour-serge-beynaud